Doorashadii golayaasha Kaniisadda Iswiidhen oo axadda la qabanayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Jens Tisbo / Sveriges Radio
Doorashadii golayaasha Kaniisadda Iswiidhen oo axadda la qabanayo
La daabacay fredag 13 september 2013 kl 12.24
Axadda foodda nagu soo haysa oo bisha sebteember tahay 15ka waxaa dalkaan Iswiidhen laga qabanqaabinayaa doorashadii golayaasha kaniisadda Iswiidhen. Haddaba ma jiraan wax isbeddel ah oo ay doorashadaani keeneyso? Lennart Lundberg oo weriye ka ah wargeyska Kyrkans Tidning wuxuu qabaa in ay dadka wax dooranaya ay ku adag tahay in ay kala ogaadaan farqiga u dhexeeya kooxaha doorashada ku tartamaya:
- Waxaan u maleynayaa in hal sabab oo aysan dad badani codkooda u bixin ay tahay in ay ku adag tahay in ay kala ogaadaan cidda ay u codeynayaan. Maxay ku kala duwan yihiin kooxaha la dooranayo? Sidoo kale ayey ugu adag tahay dadka dooranaya kooxaha xaafadaha. Tusaale ahaan waxay isku muujiyaan halkudhegyo ku adag dad badankood in ay fahmaan.
Doorashada oo afartii sano sano mar la qabto waxaa ka codayn kara dadka xubinta ka ah oo tiradoodu dhan tahay 5 milyan iyo bar. Qofka codeynayaana waa in uu buuxsaday 16 sano ugu dambeyn maalinta codbixinta.
Kooxaha sharraxan badankoodna waa kuwo taabacsan siyaasadaha xisbiyada dalka. Waxaana lagu dhaleeceeyaa in xisbiyada dalku ay saameyn ku leeyihiin hawlaha golaha kaniisadda. Haddaba mar haddii la qabto doorasho guud oo madani ah, maxaa loogu baahan yahay in qabto doorasho golayaal kaniisadeed?
- Codbixiyayaasha ayaa doorta xildhibaanada uu golaha kaniisaddu ka kooban yahay kooxda ay doonaan ka tirsanaadeene. Mana aha wax xaddadan cidda is sharraxaysa iyo cidda aan is sharraxi karin. Dadka codka bixinaaya ayaa loo bandhigaa cidda is sharraxeysa, kadibna codbixiyayaasha ayaa iska leh go’aanka kama dambeysta ah. Kaasina wuxuu ahaa Magnus Edin oo Kaniisadda Iswiidhen u qaabbilsan isuuwidda doorashada.
Su’aasha ugu weyn oo hortaal doorashada sannadkaan ayaa ah sida mustaqbalka loo qaban doono doorashada golayaasha kaniisadda. Golayaasha la dooranaayana waxay kala yihiin golaha qaranka, golayaasha gobolada iyo golayaasha hoose. Baaritaan waraysi oo uu sameeyey wargeyska Kyrkans Tidning waxaa lagu muujiyey in aysan musharraxiinta badankood taageersanayn in isbeddel lagu sameeyo habka doorashada golayaasha kaniisadda.
- Boqolkiiba 70 musharraxiintu ma doonayaan in isbeddel dhaco. Taasi waxay caddeyneysaa in ciddii la doortaba aysan keeni doonin wax isbeddel ah.
Isha: Kyrkans Tidning/Desken